Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Evening primrose oil ညနေခင်း နှင်းဆီ
Mar 12, 2011 at 7:16 PM
Can I take PanV5and evening primrose oil during pregnancy?
1. PanV5ဆိုတာ မသိပါ။ ဆေးစာထဲက ရေးထားတာတချို့ပြောပြပါ။
2. Evening primrose oil ကို ဆေးကြော်ညာတွေအရ ဒီရောဂါတွေမှာ သုံးတယ်။
Eczema, Psoriasis ခေါ်တဲ့ တာရှည်ကြာ အရေပြားအနာတွေ၊ Acne ၀က်ခြံ၊ Raynaud’s syndrome, Multiple sclerosis (MS), Sjogren’s syndrome ရှားပါးရောဂါတွေ၊ ကင်ဆာ၊ (ကိုလက်စထော) များတာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးကြောပိတ်လို့ ခြေထောက်နာတာ၊ အရက်နာ၊ Alzheimer’s disease နဲ့ Schizophrenia စိတ်ရောဂါ၊ ပန်းနာ၊ ဆီးချိုကြောင့် အာရုံကြော အားနည်းတာ၊ အ၀လွန်တာ၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး၊ Ulcerative colitis, Irritable bowel syndrome အူလမ်းရောဂါတွေ၊ လေနာ၊ ရင်သားနာတာ။
အစားထဲမှာ Essential fatty acids ရစေမယ်။ Soaps ဆပ်ပြာနဲ့ Cosmetics အလှသုံးပစ္စည်းတွေထဲလဲ ထည့်သုံးတယ်။
သုတေသနတွေအရ ထပ်သိရတာတွေကတော့ -
• Possibly effective အကျိုးရှိနိုင်လောက်တဲ့ ရောဂါတွေကတော့-
o Breast pain ရင်သားနာတာ၊
o Osteoporosis အရိုးအားနည်းတာကို ကယ်လ်စီယမ်၊ ငါးကြီးဆီတွေနဲ့ တွဲသုံးရင်၊
• Possibly ineffective အကျိုးမရှိနိုင်လောက်တဲ့ ရောဂါတွေ =
o Symptoms of premenstrual syndrome (PMS) ရာသီလာခါနီးဖြစ်တာတွေ သက်သာအောင်၊
o Attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) ကလေး သတိမကောင်း ရောဂါ၊
o Eczema နှင်းခူနာ
• Insufficient evidence to rate effectiveness လုံလောက်တဲ့ အထောက်အထားမရှိတဲ့ ရောဂါတွေ =
o Chronic fatigue syndrome (CFS) နာတာရှည် အားယုတ်တာ၊
o Rheumatoid arthritis, Osteoporosis အရိုး-အဆစ်နာ၊
o Complications of pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေဆိုရင် Pre-eclampsia ကိုယ်ဝန် သွေးဆိပ် မတက်စေအာင်၊ Shortening labor, Starting labor မွေးတာမြန်အောင်၊
o Cancer ကင်ဆာ၊
o Acne ၀က်ခြံ၊
o Multiple sclerosis (MS) မာလတီပယ်-စကယ်လ်ရိုးဆစ်၊
o Rheumatoid arthritis လေူဘက်နာ၊
o Heart disease နှလုံးရောဂါ၊
o High cholesterol ကိုလက်စထောများတာ၊
o Alzheimer’s disease အဇာမိုင်းယား၊
• ဗြိတိန်မှာ နှင်းခူနာနဲ့ ရင်သားနာတာတွေအတွက် သုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Medicines Control Agency (MCA) ကနေ ထိရောက်မှု သက်သေပြရာမှာ မခိုင်လုံလို့ဆိုပြီး လိုင်စင် ထုတ်မပေးတော့ပါ။